Loro Parque Fundación inobatsira pakubudirira kupora kweYellow-eared Parrot muColombia
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kutarisirwa » Loro Parque Fundación inobatsira pakubudirira kupora kweYellow-eared Parrot muColombia
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Colombia Breaking News • nhau • Kutarisirwa • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau
Kunyangwe anopfuura makiromita zviuru zvisere achipatsanura Canary Islands kubva kuColombia, iyo Parrot-yered-ered ine hukama hwakakosha neArchipelago: basa rekuchengetedza rinoitwa neLoro Parque Foundation kuchengetedza mhando, izvo zvakakonzera kupora kwayo.
Iko kutora chikamu kweSiseko muchirongwa chekuchengetedza Yellow-eared Parrot, pamwe neProAves Foundation yeColombia, kwave kwakakosha mukubudirira uko nhasi huwandu hwesango hweshiri idzi hwakawedzera uye hwasvika panhamba dzenhamba. Iyo nyaya yakaratidza kupona kwavo yakatanga pakati-ma1990, apo iyo Loro Parque Foundation yakatsigira kuchengetedzwa kweshiri dzekupedzisira makumi maviri muEcuador. Muna 20 vakanga vanyangarika uye zvaityiwa kuti rudzi rwacho rwakange rwatsakatika zvachose; zvisinei, mugore rimwe chetero chirongwa cheOgnorhynchus chakatanga nechinangwa chekuona kupona kwezvipenyu nenzvimbo yazvinogara muColombian Andes.
Mushure mekutsvaga kwegore rese, huwandu hwevanhu makumi masere nemasere vakawanikwa pakati peAndes, munharaunda yeRoncesvalles, muna Ndira 81 vanhu vechipiri vevanhu makumi matatu nevatatu vakaonekwa munzvimbo dzemakomo ekumadokero eAndes muJardín, muDhipatimendi re Antioquia. Mumakore kubva iko kubatirana kwakatanga, iyo Sisekelo yave iri mugadziri mukuru wechirongwa chinogona kuve chakabudirira kwazvo muSouth America yese. Uye, kutaura zvazviri, uyu wakave mwero wekupora uyo muna 2001 iyo International Union yeKuchengetedzwa Kwezvisikwa (IUCN) yakaderedza iyo yeropa-eared Parrot yekutyisidzira chikamu kubva kune 'zvakaipisisa panjodzi' kuenda 'panjodzi'.
Mhuka iyi ine hukama hwepedyo nemiti yemichindwe, muti wenyika yeColombia, unotyisidzirwa nekufudzwa kwemombe uye nekushandisa kwayo zvisina tsarukano pakupemberera Svondo yeMichindwe. Makore ekutsvagisa nezvekushandisa kwenzvimbo, kudya, kugovera, uye hunhu hwekubereka zvakapa hwaro hwakasimba pane izvo zvinotyisidzira zvipenyu nemuchindwe wewax, nokudaro zvichigonesa chirongwa chekuchengetedza pasi rese.
Pakati pezvirongwa zvakasiyana zvakaitwa mukati megadziriro yechirongwa ichi, ivo zvakare vakakwanisa kuvimba nekubatana kweVictoria. Kunyangwe paine midzi yeiyi tsika yechitendero, kubatana kwepedyo neChechi uye chirongwa chakanaka chekudzidzisa chakagonesa kuti munhu wese ashandise dzimwe nzira nhasi.